.: Ko Moe's Electronics Notes :.: MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital) card များနှင့် Sector Read/ Write Method
MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital) card များနှင့် Sector Read/ Write Method
MMC တွေကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းက သုံးတဲ့ Memory ကဒ်အမျိုးအစားတွေပါ။ SD တွေကတော့ ခုနောက်ပိုင်း သုံးလာတဲ့အမျိုးအစားပါ။ အဲဒီ ကဒ်တွေထဲကို Data Organize လုပ်တဲ့ ပုံစံ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးက File Handling Metond နဲ့ နောက်တစ်မျိုးက Sector Method ပါ။
File Handling ပုံစံကတော့ USB flash drive တွေအတွက်သုံးတဲ့ VDIP Module (ကျတော် တစ်ခါ ရေးဘူးပါတယ်) တွေမှာ သုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ File Create, Delete, Append နည်းစနစ်တွေပါပဲ။ PC software တွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။
Sector Method ကတော့ sector အလိုက်ရေးပါတယ်။ sector တစ်ခုကို 512 bytes ပါပါတယ်။ sector နံပါတ်အလိုက် ရေးသွားတာပါပဲ။ ဥပမာ - sector နံပါတ် ၅၀ ကို 'E' အက္ခရာတွေအကုန်ဖြည့်မယ်ဆိုပါတော့။ ပြီးတော့ ပြန်ဖတ်မယ် ဆိုပါတော့ (MicroC ရဲ့ library ကို သုံးပြီးရေးမယ်ဆို အောက်ပါအတိုင်း ရေးရုံပါပဲ)
for(i = 0; i <= 511; i++) data [i] = 'E';
tmp = Sd_Write_Sector (50, data);
tmp = Sd_Read_Sector (50, data);
သုံးတဲ့ Protocol က SPI protocol ပါ။ (MMC, SD card တွေက SPI ပဲသုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်)
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, June 22, 2010
Labels: General, Hardware, Programming, Project, SD Card, SPI
Anonymous Wednesday, 23 June 2010 at 4:03:00 am SGT
Brother ... I'm not Engineer somes are beyond my knowledge but always encourage you par :) sister.
MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital) card မ...